Nifarimbona namboly hazo tao amin'ny Fokontany Mandrosoa, Kaominina Soamahamanina, Faritra Itasy, androany, ny Ministeran'ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy sy ny foibem-pitondrana ankapobeny misahana ny tetikasan’ny filoha-pirenena ary ny Faritra Itasy. Tanjona manokan'ny Ministera ny hamerina indray ny ala tapia izay mitahiry ny vakoka maha-malagasy. Zana-kazo 6000 no novolena ka Zanaka tapia ny 3500 tamin’izany, nifarimbonana niaraka tamin’ny Fokonolona teny an-toerana. Ny ala tapia no iveloman'ireo landy izay mampiavaka antsika Malagasy. Ao amin'ny Faritra Itasy sy Amoron'i Mania ihany no ahitana ala tapia sy ny landy eto Madagasikara. Zana-kazo 100 000 no tanjon'ny ONG DEFI izay miaro ny tontolo iainana sy ny Ala tapia aty Itasy. (Jereo Sary Tohiny)